काभ्रेमा बस दुर्घटना २८ जना यात्रु घाइते
आठ महिने शिशुलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने दुई महिनापछि पक्राउ
बाँदर धपाउन पड्काएको भरुवा बन्दुकको गोली लागेर कार्कीको मृत्यु
सरकारसँग युद्धका निम्ति तयारी गर्न ग्रेटर नेपाल अभियान संयोजक नेपालको आव्हान
कृष्णनगरमा लगाइएको कर्फ्यु ४ घण्टाका लागि हटाइयो
जनकपुरधाममा ट्याक्टरको ठक्करबाट एकको मृत्यु
सिन्धुपाल्चोकको भैंसेमा टिपर दुर्घटना, एकको मृत्यु, दर्जन बढी घाइते
मेडिकल कलेजको फोहरले वस्ती नै दुर्गन्धित ! व्यवस्थित गर्न माग
चीनमा कृतिम चन्द्रमा,वास्तविक चन्द्रमाभन्दा ८ गुणा बढी प्रकाश
कृष्णनगरमा फेरि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु।
विपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–६ साफिनो सामुदायिक वनको जंगलमा बिहिबार बिहान यात्रुबाहक बस पल्टिँदा २८ जना घाइते भएका छन्। भकुण्डेबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको बा ३ ख ८१५५ नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट ३० मिटर
तल खोल्सामा खस्दा २८ जना यात्रु घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख एसपी रविराज खड्काले जानकारी दिए। खड्काका अनुसार घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा ४० जना सवार रहेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घाइतेमध्ये दुई जनाको
अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाईते लक्ष्मी तामाङका अनुसार गाडी पहिला नै सडकमा पल्टीन लागेको र पछि नरोकीकन उतापट्टि लगेर तल खसेपछि पल्टेको बताउनु भयो । अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएपछि दुई घण्टा वितिसक्दा समेत समयमा नै
उपचार नपाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आक्रोस ब्यतm गरेका छन्। घाइतेहरु ल्याएको दुई घण्टा वितिसक्यो, अझै पनि उपचार गरिरहेको छैन। स्थानीय बासिन्दा डोरनाथ गौतमले भने ‘विरामीहरु अस्पतालको अध्याँरो कोठामा त्यतिकै राखिराखेका छन्।
Credit : raranews.com
Posted on July 26, 2018 Author Categories मुख्य समाचार, समाचार
Previous Previous post: बजेट एक अर्ब, कार्यान्वयन पक्ष ९ प्रतिशत !
Next Next post: रसुवामा पहिरोमा पुरिएका ५ जना अझै वेपत्ता चार जनाको सनाखत